02/08/13 ~ Myanmar Forward
အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်မှ ရရှိသည်ဆိုသော အချက်အလက်များကို အီရန်ထုတ်လွှင့်
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့ ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်မှ ရရှိထားသော အချက်အလက်များဟု ကြေညာ ထားသည့် ဗီဒီယို မှတ်တမ်း အချို့ကို အီရန် အစိုးရက ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည်။ မိမိတို့ ဖမ်းယူ ထိန်းချုပ်ခဲ့ သည့် အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့ ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်မှ ရရှိထားသော အချက်အလက်များဟု ကြေညာ ထားသည့် ဗီဒီယို မှတ်တမ်း အချို့ကို အီရန် အစိုးရက ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည်။ တီဟီရန် အခြေ
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under ထူးခြားဆန်းပြား,သတင်းများ |3comments
မက္ကစီကို နိုင်ငံမှ အသက် ၉ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ မိန်းခလေး တစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ သမီး ကမလေး တစ်ဦးကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့က အောင်မြင်စွာ မွေးဖွား လိုက်တယ်လို့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်း တစ်ပုဒ်ကို ကိုးကားပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံက The Dailystar သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဖော်ထုတ်ရေး စမည
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားရေးသားသည့် “ဥပဒေ အထက်မှာ လွှတ်တော် ရှိနေသလား” ဆောင်းပါး
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ယနေ့ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားဖော်ထုတ်ရေး ကော်မရှင်က ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား မည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို တာဝန်ပေး အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်သူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
ဒန်အိုးနှင့် ဆွဲခြင်း သူခိုးဟု စွပ်စွဲပြီး ဓါးနှင့် ထိုးမှုဖြစ်
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under မှုခင်း | No comments
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သဲကုန်း မြို့နယ်၊ အင်းမ ရွှေကျောင်းကြီး ဘုရားပွဲတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် ည(၁၁)နာရီ အချိန် ခန့်၌ သူခိုးဟု စွပ်စွဲရင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဓားထိုးမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အဆိုပါနေ့ ည (၁၁)နာရီအချိန်၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းမရွှေကျောင်းကြီးဘုရားပွဲ တွင် ဇော်အေး(၃၅)နှစ်၊ ဈေး ရောင်း၊ ပြည်မြို့နေသူသည် ဘုရားပွဲ၌ ဈေးရောင်းပြီးနောက် ဘုရားပွဲ ရုပ်ရှင်ရုံ အတွင်း၌ ဇနီးဖြစ်သူ မသီတာနှင့် အတူ ရှိနေစဉ် မိုးမိုးနှင့် အိသီတို့ ရောက် လာကာ အရုပ် ရောင်းသည့် ပန်းအိ၏
ဆိုင်ကယ် (၂) စီး ပျောက်ဆုံးမှုကို စစ်ဆေးရာမှ နောက်ထပ် ဆိုင်ကယ်(၇)စီး ခိုးမှု ပါပေါ်သည့် ရွှေကျင်မြို့က ဖြစ်ရပ်
ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက် နေ့ နံနက်(၅)နာရီ အချိန်တွင် ရွှေကျင် မြို့၊ ရှမ်းကြေး ရပ်ကွက် နေသူ ကိုစိုးထွန်းအောင် ဆိုသူမှာ ၄င်း၏ ဆိုင်ကယ် များဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ လုပ် (HONDA WAVE 110)မီး ခိုးရောင် တန်ဖိုး(၈)သိန်းနှင့် တရုတ်လုပ် (NEWANBO)နီ+ နက်ရောင်တန်ဖိုး(၆)သိန်းရှိ ဆိုင် ကယ်(၂)စီးအား နေအိမ် ခြေရင်း ရှိ ဂိုဒေါင်အတွင်း သိမ်းထားခဲ့ စဉ် ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်ဆို၏။
တဒင်္ဂစိတ်ကြောင့် ဖခင် ဖြစ်သူက ကိုယ့်သမီး အရင်းကို ဓါးနဲ့ ခုတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး ခရိုင်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပတုန်းမြောင်တဲတိုက်တွင် ဖခင် ဖြစ်သူက သမီးဖြစ် သူကို ဓားဖြင့် ခုတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် ညနေ ၃းဝဝ နာရီ အချိန်ခန့်က တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကုက္ကိုကုန်း အုပ်စုညောင်မှော်ကျေးရွာနေ ဒေါ်အေးကြည် (၅၅) နှစ်၊ (တောင်သူ)သည် နေအိမ်၌ရှိနေ စဉ်ပတုန်းမြောင်တဲတိုက်သို့ အလုပ် လုပ်ရန်သွားသော သမီးဖြစ်သူ မခင် အေးမြင့် (၁၈) နှစ် (တောင်သူ) မှာ ဦးခေါင်းထိပ်တွင် (၄) လက်မခန့်ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာတစ် ချက်ဖြင့် အိမ်သို့
Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 ကို Root လုပ်နည်း
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under နည်းပညာ | No comments
1. Download Odin3.zip package and unzip.
2. Download the ROOT.tar file.
3. Enter into download mode (volume down+home+power on) and connect phone to the PC.
4. Open Odin and select ROOT.tar file as PDA then start flash. Wait for the phone to reboot.
Andriod ဖုန်းတွေကို အားလုံး Root လုပ်တတ်ကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်.... ဒါ့ကြောင့် မူရင်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...။
ဖုန်းကို ဘာမှမလုပ်ခင် “Settings > Applications > Development > USB debugging” ကိုသွားပြီး အမှန်ခြစ်လေးတပ်ပေးထားပါ..။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး တမူးခရိုင် မြို့သစ်မြို့နယ် ခွဲအနီးရှိ တံတား တစ်စင်းအား သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့တချို့က မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဒေသခံ တိုင်ရင်းသား ပြည်သူများ အသုံးပြုလျက် ရှိသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး တမူးခရိုင် တမူး- စေတီ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီး ပေါ်ရှိ မြို့သစ်မြို့ နယ်ခွဲ အနီးတွင် တည်ဆောက် ထားသော အရှည် ၂၄ဝပေ၊ အကျယ် ၁၂ ပေရှိ သံပေါင် ဘေလီ အမျိုးအစား တံတား တစ်စင်း အား ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ တချို့က မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ခြင်းကြောင့် တံတား ရေလယ်တိုင် ၃ တိုင် ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး သစ်သား ကြမ်းခင်း များ ပေ ၆ဝ ခန့်နှင့် သံပေါင်များ ကွေးကောက် ပျက်စီးခဲ့သည်။
PlayStation ဂိမ်းစက်အသစ် Sony မိတ်ဆက်သွားဖွယ်ရှိ
ဂျပန် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး၏ ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍ အတန်ငယ် ယိမ်းယိုင်နေမှုကို ဖာထေးရန်အတွက် ယခုဂိမ်းစက်သည် အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်နိုင်မည့် ထုတ်ကုန်လည်း ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေသည်။
Sony ကုမ္ပဏီသည် ယခုလအတွင်း PlayStation ဂိမ်းစက် အသစ်ကို မိတ်ဆက် ကြေညာသွားဖွယ် ရှိနေကြောင်း ဂျပန် မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဂျပန် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး၏ ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍ အတန်ငယ် ယိမ်းယိုင်နေမှုကို ဖာထေးရန်အတွက် ယခုဂိမ်းစက်သည် အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်နိုင်မည့်
စာရွက်စာတမ်း အတု ပြုလုပ်၍ အိမ်များ ဝယ်ယူခဲ့သည့် တရားခံ များအား တရုတ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး
ပေကျင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၇
တရုတ် နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း လူဖန်းမြို့တွင် သက်သေခံ စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများ အတု ပြုလုပ်၍ အိမ်ခြေပေါင်း ၁၉၂ လုံးကို ဝယ်ယူခဲ့သည့် ရဲအရာရှိဟောင်း တစ်ဦးကို တာဝန်ရှိသူ များက ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း အင်တာနက် သတင်း အရ သိရသည်။
အမည်မသိ အမျိုသမီးတစ်ဦးနှင့် တွဲနေသည့် လီယိုနာဒို
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under သတင်းများ | No comments
Titanic ဇာတ်ဆောင် မင်းသားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံး အနုပညာ ကြယ်ပွင့် အမျိုးသမီး အတော်များများနှင့် လက်တွဲခဲ့သလို လမ်းလည်း ခွဲခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မီယာမီတွင်မူ အမည်မထင်ရှားသော မိန်းမလှလေး တစ်ဦးကို ရွေးချယ် အချိန်ဖြုန်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဦးပိုင် ကမ္ပဏီ အခွန် ဆောင်ရတော့ မလား
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ စတင်ဖွဲ့စည်း ကတည်းက ၀င်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရနေခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ မြန်မာ့ စီးပွား ရေး ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ အခု အခွန်စည်းကြပ် ခံရတော့မဲ့ အခြေအနေ ရှိနေပြီလို့ ပြည်တွင်း သတင်းတွေ ထဲမှာ ဖော်ပြ နေကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ (MSF/AZG) က မွတ်စလင် များ ဘက်မှ ပါဝင် ပက်သက်မှု မရှိ ခဲ့ကြောင်း လူသိ ရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပေးရန် အစိုးရထံ တောင်းဆို လိုက် ကြောင်း သိရ သည်။
ထိုဖြစ် စဉ်တွင် MSF အနေဖြင့် နောက်ကွယ်မှ ပါဝင် ပက်သက် ခဲ့သည် ဆိုသည့် ကောလာ ဟလ များကြောင့် ၎င်းတို့ အဖွဲ့ အစည်းကို အစိုးရစစ်တပ်မှ လာရောက်ရှာဖွေသော်လည်း ဘာမှမတွေ့ခဲ့သည်ကို
KIA အရာရှိများမှ နိုင်ငံခြားသားသတင်းသမား၂ဦးရောက်ရှိမှုအပေါ်သံသယဖြစ်
စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် စခန်းများနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားနေမှု အခြေ အနေ များကို မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရန် အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံသား သတင်းထောက် တစ်ဦးနှင့် ဂျပန် နိုင်ငံသား သတင်းထောက် တစ်ဦးတို့ သည် ၅ရက် နေ့က ၀န်ဂေါဘွမ်သို့ရောက်လာပြီး ဒုက္ခသည် စခန်း အတွင်းမှ ဒုက္ခသည် များကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူး ခြင်းနှင့် စခန်း အတွင်းမှ KIA စစ်သည်များ၏ပုံများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး ယမန်နေ့ညက လိုင်ဇာ အနီးရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းနှင့် KIA စခန်းများကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရန် ရောက်ရှိ ခဲ့ကြောင်း ဗဟို ဌာန ချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦး၏ ပြောပြချက် အရ သိရှိ ရပါသည်။
အမေရိကန်တွင် Facebook သုံးစွဲခြင်းမှ ခေတ္တရပ်နားထားလေ့ရှိကြ
အမေရိကန်တွင် Facebookကို ပုံမှန် သုံးစွဲသူ အများစုသည် ယခုအခါ အဆိုပါ Social Networking ဝက်ဘ် ဆိုက်မှ အချိန်တစ်ခုစာ ကင်းကွာအောင် အနားယူ ဖယ်ခွာလေ့ ရှိလာကြောင်း စစ်တမ်းတစ်ခုက ဖော်ပြခဲ့ သည်။ Facebookကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျှ ပုံမှန်ထိတွေ့ သုံးစွဲခဲ့သူများအနက် (၆၁)ရာခိုင်နှုန်း မျှသည်သည် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် Facebookကို အဆက်ဖြတ်ထားခဲ့ကြောင်း Pew သုတေသန စင်တာ၏ အမေရိကန် လူမှုဘဝ ပရောဂျက် ဌာနက ကောက်ယူသော စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထား သည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းကို ဆက်သွယ် ရေး သတင်း အချက်နှင့် နည်းပညာဌာန ၀န်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်က အဆိုပြု ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသည် G 8 ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲအား အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပ သွားမည်ဟုဆို
ရုရှား နိုင်ငံသည် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် G8 ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲအား Sochi မြို့တွင် အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရ ပါသည်။
အိန္ဒိယ တပ်မတော်သည် မောင်သူမဲ့ လေယာဉ် အခြေစိုိုိက် စခန်းများ တည်ဆောက်လျက် ရှိခြင်း
အိန္ဒိယ တပ်မတော်သည် တရုတ်နှင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသည့် အရှေဘက်နှင့် အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာ တို့ကို ရည်ရွယ်လျက် လျှို့ဝှက် လက်နက်တိုက်များ၊ ပစ်မှတ်ရှာ စနစ်များနှင့် Killer မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် များ အတွက် အခြေစိုက် စခန်းများ တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ Newsnow သတင်းတစ်ရပ် အရ သိရှိ ရပါသည်။
သူရဘွဲ့ ၃ ဦး နှင့် သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင် ၂၅ ဦး သမ္မတ ချီးမြှင့်
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေကို သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန် လိုက် ကြောင်း ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ပြန်တမ်း ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။
စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေအနက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယ၊ သီဟသူရ ဘွဲ့တံဆိပ်ရသူ မရှိဘဲ သူရဘွဲ့ရသူ ၃ ယောက်နဲ့ သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင် တံဆိပ်ရရှိသူ ၂၅ ယောက် ပါရှိပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, February 08, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ,သတင်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းက အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေ လျှော့ကျ စေရေး နှစ်ဖက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ KIO အကြား သဘော တူညီချက် ရတဲ့ အပေါ် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ကြိုဆိုလိုက်ပြီး၊ ခိုင်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နှစ်ဖက် စလုံး ဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ဆက် ပေးမှာပါ။
ဓာတ်ပုံ - တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Kaesong စက်မှုဇုံကို တင်ပို့နေတဲ့ ကုန်တင်ကားများကို တွေ့ရစဉ်။
တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေအကြား တင်းမာမှုတွေ တိုးမြင့် ဖြစ်ပေါ်နေ တာကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ ပြန် လည် ရင်ကြားစေ့နိုင်ရေး သင်္ကေတအဖြစ် နောက်ဆုံး လက်ကျန်အဖြစ် တည်ရှိနေသေးတဲ့ စက်မှု လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရေး အစီအစဉ်တွေကို ထိခိုက်လာနေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - NOAA မုန်တိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးက ထုတ်ပြန် တဲ့ နှင်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့ ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံ
အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု အရှေ့မြောက်ပိုင်းဖက်ကို သမိုင်းမှာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အင်အားပြင်း နှင်းမုန်တိုင်း တခု ဦးတည်နေတဲ့အတွက် အဲဒီ့ဒေသတွေမှာ နေထိုင်သူတွေကို အိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့နဲ့ တတ်နိုင် ရင် ကားတွေ မသွားကြဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက တိုက်တွန်းနေပါ တယ်။
အာရှ ဒေသမှာ ကြားခံ အဖြစ် အဓိက ချိတ်ဆက် နိုင်မယ့် ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သစ်ကြီး တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မိုင် ၅၀ ခန့် အကွာမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနဲ့ အခုနှစ် အတွင်း စတင် တည်ဆောက်ဖို့ ကုမ္ပဏီ ၇ ခုကို လေလံတွေ စတင် ချထား တော့မယ်လို့ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အကြီးတန်း အရာရှိ တစ်ဦးက RFA ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ ပြောကြား ပါတယ်။
အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်မှ ရရှိသည်ဆိုသော အချက်အလ...
ဒန်အိုးနှင့် ဆွဲခြင်း သူခိုးဟု စွပ်စွဲပြီး ဓါးနှင်...
ဆိုင်ကယ် (၂) စီး ပျောက်ဆုံးမှုကို စစ်ဆေးရာမှ နောက်ထ...
တဒင်္ဂစိတ်ကြောင့် ဖခင် ဖြစ်သူက ကိုယ့်သမီး အရင်းကို ဓ...
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး တမူးခရိုင် မြို့သစ်မြို့နယ...
စာရွက်စာတမ်း အတု ပြုလုပ်၍ အိမ်များ ဝယ်ယူခဲ့သည့် တရ...
KIA အရာရှိများမှ နိုင်ငံခြားသားသတင်းသမား၂ဦးရောက်ရ...
အမေရိကန်တွင် Facebook သုံးစွဲခြင်းမှ ခေတ္တရပ်နားထား...
ရုရှားနိုင်ငံသည် G 8 ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲအား အိမ်ရှ...
အိန္ဒိယ တပ်မတော်သည် မောင်သူမဲ့ လေယာဉ် အခြေစု...
နယ်ခြားစက်ရုံကို စစ်နယ်မြေ သတ်မှတ် ဖို့ မြောက်ကိုရ...